Kunzwisisa Zvido zveVatengi vako nePredictive Analytics | Martech Zone
Kunzwisisa Zvido zveVatengi Vako nePredictive Analytics
Chitatu, June 14, 2017 Douglas Karr
Kune vazhinji vanoita zvekutengesa uye vezvekutengesa, ihondo inogara iripo kuti uwane chero maonerwo anoitika kubva kune data riripo. Iko kupwanya vhoriyamu reinouya dhata kunogona kutyisidzira uye kutetepa zvakakwana, uye kuyedza kubvisa iyo yekupedzisira ounce yeiyo kukosha, kana kunyangwe kungoita chete kiyi nzwisiso, kubva kune iyo data inogona kuve iri basa rinotyisa.
Munguva yakapfuura, sarudzo dzaive shoma:
Hira data masayendisiti. Maitiro ekutora nyanzvi nyanzvi vanoongorora kuti vaongorore dhata vodzoka nemhinduro dzinogona kunge dzichidhura uye dzichidya nguva, kutsenga mavhiki kana mwedzi, uye dzimwe nguva uchingodzoka mhinduro dzinokatyamadza.
Vimba ura hwako. Nhoroondo yakaratidza kushanda kwemhedzisiro iyi kunogona kutonyanya kusahadzika.
Mira uone zvinoitika. Maitiro ekuita izvi anogona kusiya musangano mune iyo miasma yekukwikwidzana nevamwe vese vatora nzira imwecheteyo.
Kufanotaura analytics vatsemura kubatana kwekushambadzira kwevatengesi uye nyanzvi dzekutengesa, zvichivagonesa kuvandudza uye kugadzirisa mhando yekutungamira mamodheru ayo anowedzera mushandirapamwe.
Kufanotaura analytics tekinoroji yakashandura nzira iyo mabhizinesi anonzwisisa, kuongorora uye kubatisa avo varipo uye vanotarisira vatengi vachishandisa AI uye kudzidza kwemuchina, uye iri kuita shanduko yakakosha mukushambadzira uye nyanzvi dzekutengesa dzinoongorora nekubvisa kukosha kubva kudhata ravo. Izvi zvakatungamira kune zvimwe zvinotsanangurwa analytics zviitiko mukugadzirwa uye kutumirwa kwezvishandiso zvinonyatsoita uye zvakanyanya kudzikisa dhata pamusoro pevatengi vebhizimusi uye zvavanoda.
Kufanotaura analytics inoenderera mberi inovaka pamusoro pekudzidzira muchina kudzidza uye AI, kukurumidza kuunganidza akafanofungidzirwa mamodheru. Aya mamodheru anogonesa kutungamira kurova, nyowani-inotungamira chizvarwa uye yakawedzeredzwa data rekutungamira nekushandisa sangano riripo mutengi uye tarisiro data uye kufungidzira kuti izvo zvinotungamira kana vatengi vanozobata sei - zvese pamberi pekutengesa uye kushambadzira zviitiko zvisati zvatanga.
Iyo tekinoroji nyowani, yakadzika mune mhinduro senge Microsoft Dynamics 365 uye Salesforce CRM, Inopa kugona kwekuenzanisira maitiro evatengi mumaawa kuburikidza nemaitiro-anoshamwaridzika enzira anozvigadzirira uye asingade data masayendisiti. Iyo inogonesa kuyedzwa kuri nyore kwemazhinji mhedzisiro uye kufambira mberi ruzivo rwekuti zvii zvinotungamira zvinonyanya kutenga chigadzirwa chekambani, kunyorera kukambani tsamba, kana kushandura kumutengi neimwe nzira, pamwe nekutungamira uko kungangotadza kutenga, zvisinei dhiri racho rinotapira zvakadii.
Ruzivo rwakadzama rwehunhu runopa simba kuvashambadzi kuti vagadzirise ruzivo rwevatengi nekushandisa simba remuchina kudzidza-based mamodheru, uye zvese zviri zviviri bhizinesi nevatengi data hunhu kuti vawane yakasimba, inonzwisisika, uye yekufungidzira inotungamira yekurovera mamodheru. Shanduko mitengo inogona kuwedzera neinosvika mazana mazana maviri nemakumi mashanu ezana mazana mashanu ezviuru muzana, uye neiyuniti-yemaodhi emitengo inokwira kumusoro kusvika kusvika makumi mashanu muzana.
Kufanotaura, kushambadzira kwekushambadzira kunobatsira bhizinesi kwete kungowana chete zvimwe vatengi asi zviri nani Vatengi.
Kuongorora kwakadzama uku kunotungamira mukunzwisisa kukuru kwebhizinesi kana mukana wevanhu wekutenga kana kuita, uku uchipawo vashambadziri mukana wehungwaru hunogadziriswa hunopedzisira hwafanotaura maitiro emangwana. Kana zvikwata zvekutengesa uye zvekushambadzira zvikwanisa kuwana nzwisiso mumaitiro evatengi vavo zvazvino uye zvingangoitika mune ramangwana, vangango tarisa masevhisi uye zvigadzirwa zvinovafadza. Uye izvo zvinoreva kuti zvinobudirira kutengesa nekutengesa, uye pakupedzisira vatengi vazhinji Chris Matty, CEO uye muvambi we Versium
Kufanotaura analytics inogonesa zvikwata zvekutengesa uye zvekushambadzira kuti vabvise mazano akakosha kubva kune nhoroondo yevatengi uye data reCRM kugadzira zvigadzirwa zvekufungidzira.
Pachinyakare, Kwevatengi Ukama Hwekutarisira (CRM) yanga ichinyanya kuita, reactive kufambisa. Nedzimwe nzira dziri kushandisa mari uye nguva kungave pane data masayendisiti kana pane hunch, kuita inoshanda ndiyo nzira ine njodzi. Kufanotaura analytics kuyedza kushandura kutengesa uye kushambadzira CRM nekudzora njodzi uye kubvumidza timu yekutengesa kuti iratidze kumhanya kwehungwaru kutengesa uye kushambadzira kushambadzira.
Uyezve, kufungidzira analytics inogonesa chizvarwa chekufungidzira kutungamira mamaki kune ese ari maviri B2C uye B2B ekushambadzira tarisiro iyo inogonesa kushambadzira nekutengesa zvikwata kuve laser yakatarisana ne rudyi vatengi panguva chaiyo chaiyo, vachivatungamira kune zvakafanira zvigadzirwa uye chaipo masevhisi. Aya marudzi e analytics bvumira vashandisi kugadzira uye kuwedzera nyowani, yakakwira-kutendeuka tarisiro rondedzero inoenderana nesangano riripo vatengi ma profiles nekumisikidza proprietary data seti kana dura yekuchengetera.
Mamwe emakesi anowanzo shandiswa e data hombe analytics wakatarisana nekupindura mubvunzo, Ndeupi mutengi angangotenga? Hazvishamisi kuti izvi zvakatsikwa-tsikwa pasi naBI uye analytics zvishandiso, nedata data masayendisiti anovandudza tsika algorithms pane zvemukati data seti, uyezve munguva pfupi yapfuura, nekushambadzira makore anopihwa nevapiwi vakaita seAdobe, IBM, Oracle, uye Salesforce. Pamusoro pegore rapfuura, mutambi mutsva akabuda aine chishandiso chekuzvishandira icho, pasi pezvivharo, zvinoshandisa michina kudzidza, inotsigirwa nechengetedzo dhata yakatarwa ine inopfuura tiririyoni imwe hunhu. Iyo kambani [ndeye] Versium. Tony Baer, ​​Mukuru Muongorori pa Ovum
Kufanotaura analytics pamaitiro evatengi inzvimbo ine vanhu vazhinji, akadaro Baer. Kunyange zvakadaro, zvichibva pakuziva kuti data ndimambo, iye anopa kuti mhinduro senge dzeVersiyamu inzira inomanikidza nekuti dzinopa mukana kune yakakura dura revatengi nedhata rebhizinesi ine chikuva chinosanganisira kudzidza kwemuchina kubatsira vashambadzi kufanotaura maitiro evatengi.
Versium kununura otomatiki kufungidzira analytics mhinduro, idzo dzinopa ruzivo rwekuita rwe data nekukurumidza, zvakanyatsoita uye pachidimbu chemutengo wekuhaya dzinodhura dhata resainzi zvikwata kana masangano ehunyanzvi.
Mhinduro dzeVesiyamu dzinosimudzira dura rekambani rakakura reLifeData®, iro rine zvinopfuura 1 trillion mutengi uye bhizinesi data data. LifeData® ine zvese zvepamhepo uye zvepamhepo zvehunhu data zvinosanganisira zvemagariro-graphic ruzivo, chaiyo-nguva yechiitiko-yakavakirwa dhata, zvido zvekutenga, ruzivo rwemari, zviitiko uye hunyanzvi, huwandu hwevanhu uye nezvimwe. Hunhu uhu hwakaenzanisirwa nedhata remukati rebhizinesi, uye rinoshandiswa mumamishini ekudzidza mamodheru kusimudzira kuwanikwa kwevatengi, kuchengetedza uye kutengesa-kutengesa uye kusimudzira zviitiko zvekushambadzira.
Dzidza Zvakawanda Nezve Versium Kufanotaura
Tags: mutengi wehutano hwehukamamicrosoft dynamics 365ovumpredictive analyticsvatengesi crmversium
Tose Tinovenga Spam uye Cold-Calling… Kusvikira Tisingadaro